Ebe njem ọkacha mmasị maka ndị America n'oge okpomọkụ a ekpughere ugbu a
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ USA » Ebe njem ọkacha mmasị maka ndị America n'oge okpomọkụ a ekpughere ugbu a
Na-agbasa News Travel • News • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Ka afọ abụọ gachara akara site na mmetụta nke ọrịa Covid-19 na njem nlegharị anya, onye na-eweta njikọta ekwentị, Ubigi, kpughere usoro njem njem zuru ụwa ọnụ n'oge ọkọchị.
Karịsịa, ọ na-akọ ebe ndị njem nlegharị anya kacha amasị ndị America dabere na oriri data ha n'oge okpomọkụ.
Ihe ọmụmụ mba ụwa a gbadoro ụkwụ na nyocha nke oriri nke eSIM mobile data atụmatụ site na nlele nke ndị ọrụ 10,000.
Emebere ya gburugburu oge n'etiti Julaị na Ọgọst 2021 dịka obodo ndị ọrụ si bi.
Nke mbụ, na ọkwa mba ụwa, enwere mmụba dị ukwuu na oriri data n'oge okpomọkụ, ebe ọ bụ na ebuliri mmachi njem n'ọtụtụ mba. Ọnụ ahịa nke atụmatụ data amụbaala okpukpu abụọ na Julaị na Ọgọst 2021 ma e jiri ya tụnyere Mee na June 2021, ọ rịrị okpukpu atọ (+ 246%) ma e jiri ya tụnyere otu oge ahụ na 2020.
N'ọkwa obodo, America abụla ndị mmeri nke eSIM Nkuchi, ịtụkwasị onwe ha dị ka ndị mbụ ọrụ nke data atụmatụ ma ná mba ọzọ na n'ụlọ. Gịnị mere na ebee ka ha gara?
Isi ihe atụ nke ihe ọmụmụ maka United States
Ndị America bụ ndị mmeri nke ojiji data roaming
• 73% nke data ndị America riri na mba ofesi.
Europe bụ ebe ndị America kacha aga njem nlegharị anya n'oge okpomọkụ a
• 55% nke data ndị America riri na-edebanye aha na atụmatụ data mere na Europe, na-ekpughe agụụ ha maka mpaghara mpaghara a.
• N'etiti mba Europe gara, United States kwadoro France karịsịa, na 21% nke mkpokọta data ha na-eri na obodo a n'oge okpomọkụ a.
• Ndị njem nlegharị anya America gakwara ebe ndị ọzọ dị na Europe dịka Spain (6%), Greece (6%), Great Britain (6%) na Italy (5%).
Ojiji eSIM dị mkpa na mba niile
• Ọ bụ ezie na ndị America na-ejikarị eSIM ha ná mba ọzọ, ha na-ejikwa atụmatụ data iji mee njem na United States maka 27% nke mkpokọta data ha na-eri n'oge ahụ.